Best Phones With Higher Display Refresh Rate – 90Hz & 120Hz | Net Guide
Home Article Best Phones With Higher Display Refresh Rate – 90Hz & 120Hz
2019 ခုနှဈအတှငျး စမတျဖုနျးဝါသနာရှငျမြားကွားမှာ လူပွောအမြားဆုံးဖွဈခဲ့တဲ့ စမတျဖုနျး နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ အသုံးအနှုနျးတဈခု ရှိပါတယျ။ 90Hz displays ဆိုတဲ့ Display Refresh Rate ပါ။ မွငျ့မားတဲ့ Display Refresh Rate ဆိုတာ ဟိုးယခငျတညျးက monitor တှဆေီမှာ ရှိနခေဲ့ပွီးသားပါ။ ယခုနှဈပိုငျးလောကျမှသာ ဖုနျးတှဆေီကို ရောကျရှိလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးတှဆေီကို ရောကျတဲ့ Display Refresh Rate တှကေလညျး တဖွညျးဖွညျ့ မွငျ့မားသထကျ မွငျ့မားလာပါတယျ။ တျောတျောမြားမြား စမတျဖုနျးသုံးတဲ့ သူအမြားစုကတော့ ဖုနျးရဲ့မကျြနှာပွငျဆိုတာနဲ့ resolution, colors, PPI နဲ့ Display ကို ဘယျအမြိုးအစား သုံးလာတယျဆိုတာလောကျကိုသာ ပွောကွမှာပါ။ display refresh rate ကိုတော့ အရမျးဦးစားပေး ပွောကွမှာ မဟုတျပါဘူး။ display refresh rate ဆိုတာကလညျး 2019 ရောကျမှသာ သခြောလေး လူပွောသူပွော မြားလာတာပါ။ ဒီနေ့ ဒီအခြိနျမှာလညျး display refresh rate ဆိုတာ ဖုနျးတဈလုံးအတှကျ လိုအပျခကျြတဈခုလိုတောငျ ဖွဈနပေါပွီ။ ဒီတဈပတျမှာတော့ 90Hz or 120Hz refresh rate displays သုံးထားတဲ့ ဖုနျးတှအေကွောငျး ဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
(1). Refresh Rate (Hz) ဆိုတာ ဘာလဲ။ FPS နဲ့ အတူတူပဲလား။
refresh rate ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကတော့ layman terms အမြိုးအစားထဲမှာပါပွီး တဈစက်ကနျ့အတှငျး ဖနျသားပွငျ၏ ပုံရိပျကို အကွိမျမညျမြှ Refresh လုပျသှားတယျဆိုတဲ့ အရအေတှကျကို ပွောတာပါ။ ၎င်းငျးကို အခွခေံအားဖွငျ့ Hz နဲ့ တိုငျးတာပါတယျ။ လကျရှိစမတျဖုနျးအမြားစုမှာ အသုံးပွုနတေဲ့ Refresh Rate ကတော့ 60Hz refresh rate ဖွဈပါတယျ။ သာမာနျဖုနျးတဈလုံးရဲ့ 60 Hz Refresh Rate ဆိုလြှငျတောငျ လူ့ရဲ့မကျြစိ အမွငျအာရုံဖွငျ့ သတိပွုမိနိုငျစှမျးထကျ မွငျ့မားနေ၍ ပုံမှနျအသုံးပွုသူမြားအတှကျတော့ Screen Refreshing ကို သတိမပွုမိနိုငျပါဘူး။ တခြို့က Refresh Rate ကို Frame Per Second နဲ့ မှားတတျကွပါသေးတယျ။ Frame rate ဆိုတာက program တဈခုကနေ သငျ့ display ကို တဈစက်ကနျ့အတှငျး ပေးပို့တဲ့ video frame ပမာဏကို ပွောတာပါ။ အဲ့ဒီပေးပို့လိုကျတဲ့ frame တှကေို တဈက်ကနျ့အတှငျး ဘယျနှဈကွိမျ update လုပျပွီး ပွနိုငျလဲဆိုတဲ့ နှုနျးကိုတော့ Display Refresh Rate လို့ ဆိုပါတယျ။ ဥပမာ game တဈမြိုးက 100 FPS (Frame Per Second) နဲ့ run နတေယျဆိုရငျ refresh rate မြားတဲ့ display နဲ့ဆိုရငျ လှုပျရှားမှုတှကေို ပိုမိုခြောခြောမှတျမှတျ မွငျတှရေ့မှာပါ။ ပုံမှနျဖုနျးတှမှော သုံးနတောတှဟော refresh rate 60Hz နဲ့ပါ။ ဒါပမေဲ့ အခုဆိုရငျ 90Hz & 120Hzသုံးထားတဲ့ ဖုနျးတှလေညျး ရှိနပေါပွီ။
(2). Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra
စမတျဖုနျးထုတျလုပျမှုပိုငျးမှာ ဦးဆောငျသူဖွဈတဲ့ ကိုရီးယားကုမ်ပဏီ Samsung ဟာ refresh rate မွငျ့မားတဲ့ စမတျဖုနျး displays ထုတျလုပျမှုအပိုငျးမှာလညျး နာမညျကွီးပါတယျ။ ပိုကောငျးတဲ့ မွငျကှငျးအတှကျဆိုရငျ Samsung refresh screen ဖုနျးတှေ လိုအပျသလိုပါ။ ဒီလိုကုမ်ပဏီကွီးဟာ ကုမ်ပဏီရဲ့ အရညျအသှေးမွငျ့ စမတျဖုနျးတှဖွေဈတဲ့ Galaxy S20, Galaxy S20+ နဲ့ Galaxy S20 Ultra ဖုနျးတှမှော Infinity-O Displays နဲ့အတူ 120Hz refresh rate ကို သုံးပေးထားပါတယျ။ မူလက Quad HD+ resolution ကို ထောကျပံ့ပေးခဲ့ပမေ့ယျ့ 120Hz refresh rate option ကို FHD+ resolution အတှကျ ကနျ့သတျလိုကျပါတယျ။ hardware ပိုငျးအရဆိုရငျတော့ ဒီဖုနျးတှမှော Snapdragon 865 SoC / Exynos 990 SoC တှနေဲ့ အတူ 16GB LPDDR5 RAM ၊ 512GB (UFS 3.0 storage) တှေ ထောကျပံ့ထားပါတယျ။ ကငျမရာကလညျး ယခငျ S စီးရီးတှနေဲ့ လုံးဝကှဲပွားသှားပွီး 108MP အဓိကကငျမရာနဲ့ 48MP periscope zoom ကငျမရာတှတေောငျ သုံးနပေါပွီ။ 8K video တှေ ရိုကျကူးနိုငျပွီး professional-level filming အထိ စှမျးဆောငျနိုငျပွီလို့ Samsung က ဆိုပါတယျ။
(3). Asus ROG Phone 2
ROG Phone2ဟာ 120Hz AMOLED display နဲ့အတူ Snapdragon 855 Plus chipset ကို ပထမဆုံးသုံးတဲ့ဖုနျးလို့ သတျမှတျနိုငျမှာပါ။ သူ့ရဲ့ display အကွောငျးကို ပွောရမယျဆိုရငျတော့ 6.59-inch Full HD+ screen မှာ Gorilla Glass6နဲ့ ကာကှယျပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ under-display fingerprint scanner ကိုလညျး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ပွီးတော့ သူ့မှာ DCI-P3 color scale, HDR10 နဲ့ SDR ကနေ HDR အထိ တိုးမွငျ့ပေးနိုငျတဲ့ Display နညျးပညာတှလေညျး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ပါဝါစှမျးအားပိုငျးအတှကျ 6000 mAh ခပျကွီးကွီး ဘကျထရီကို 30W fast charging support လုပျပါတယျ။ နောကျထပျပါလာတာတှကေတော့ 12GB LPDDR4x RAM နဲ့ 512GB (UFS 3.0 storage) တို့ပါ။ ကငျမရာပိုငျးကိုတော့ 48MP အပွငျ 13MP2လုံး ထညျ့ပေးထားပွီး အရှဘေ့ကျမှာ 24MP သုံးနိုငျမှာပါ။
(4). OnePlus 7T Pro and OnePlus7Pro
တူညီတဲ့ လုပျဆောငျခကျြနဲ့ ဖွညျ့စှကျပါဝငျမှုတှေ အပိုငျးမှာ အဆငျ့မွငျ့တဲ့ဖုနျးတှလေို့ သတျမှတျရမှာပါ။ ပွီးတော့ high display refresh rate ကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ။ ဒီဖုနျး2လုံးမှာ ကှာဟခကျြဆိုလို့ OnePlus 7T Pro မှာ Snapdragon 855 Plus chipset နဲ့ Warp 30T charging သုံးထားတာပါ။ ကနျြတဲ့အခကျြတှေ အားလုံးနီးပါးကတော့ OnePlus7Pro နဲ့ တူညီပါတယျ။
(5). OnePlus 7T
high refresh rate screen နဲ့ ဖုနျးကိုငျခငျြရငျ OnePlus ထဲကပဲ ဝယျရမလိုတောငျ ဖွဈနပွေီ။ OnePlus 7T ကလညျး ဒီလိုအရညျအသှေးမွငျ့ refresh rate နဲ့ ဖုနျးစာရငျးထဲမှာ ရောကျနလေို့ပါ။ ဒီဖုနျးမှာ high-quality AMOLED screen သုံးထားတာကတော့ တကယျမိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ သူ့ရဲ့ ပါဝါစှမျးအားပိုငျးအတှကျ Snapdragon 855 Plus chipset နဲ့ဖွဈပွီး 8GB RAM ၊ 128GB storage တှေ သုံးပေးထားပါတယျ။ 30W Warp charging လညျး ဘကျထရီအတှကျ ထောကျပံ့ပေးထားပါသေးတယျ။
(6). Realme X2 Pro
စြေးလညျး သကျသာရမယျ။ အရညျအသှေးပိုငျးမှာ စိတျခရြမယျဆိုပွီး ထှကျလာတဲ့ Realme ဖုနျးတှမှော Realme X2 Pro ကလညျး အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ အဆငျ့တဈခုမှာ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ Realme ရဲ့ ပထမဆုံး flagship ဖုနျးလို့ သတျမှတျနိုငျပွီး 90Hz FHD+ AMOLED Screen သုံးထားပါတယျ။ ပါဝါစှမျးအားပိုငျးအတှကျ Snapdragon 855+ chipset နဲ့အတူ ထပျမံတိုးမွငျ့နိုငျစှမျးရှိတဲ့ 256GB UFS 3.0 storage တှနေဲ့ သုံးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ 4000 ဘကျထရီစှမျးအားအတှကျ 65W Super VOOC charging နဲ့ အားသှငျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကုမ်ပဏီရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ 100% အားအပွညျ့ရဖို့အတှကျ 30 မိနဈပဲ ကွာမယျလို့ သိရပါတယျ။
(7). Poco X2
စြေးသကျသာတဲ့ စှမျးရညျသငျ့ဖုနျးလို့ သတျမှတျနိုငျမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ သူ့မှာသုံးထားတဲ့ refresh rate ကွီးကတော့ ကြှတျဆငျကွီးပါ။ ဒီဖုနျးအတှကျ 120Hz refresh rate screen သုံးထားပါတယျ။ 6.67-inch IPS display မှာ full HD+ resolution ထောကျပံ့ပါတယျ။ HDR10 support လုပျတဲ့ ဖုနျးလို့လညျး ဆိုရမှာပါ။ X2 display အခကျြအလကျတှကေတော့ ကွညျ့ရတာကောငျးမယျ့ ဖုနျးတဈလုံးအဖွဈ ပုံဖျောနပေါတယျ။ မွငျ့မားတဲ့ 120Hz refresh rate ဖုနျးမှာ သုံးထားတဲ့ ပရိုဆကျဆာကတော့ Snapdragon 730G သုံးထားပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့နှဈက မိတျဆကျခဲ့တဲ့ Redmi K30 နဲ့ သှားတူနပေါတယျ။ Poco X2 ရဲ့ အပျေါလှငျဆုံးအခကျြကို ပွောရမယျဆိုရငျတော့ 4500 mAh ဘကျထရီနဲ့ 27W fast charger လို့သာ ဆိုရမှာပါ။
(8). Nubia Red Magic 3
ဂိမျးမငျးဖုနျးတဈလုံးအတှကျ refresh rate ဘယျလောကျသုံးထားတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးက အမှနျတကယျ လိုအပျလှပါတယျ။ ZTE ကြောထောကျနောကျခံလုပျထားတဲ့ Red Magic3မှာ 90Hz AMOLED screen ထောကျခံပါတယျ။ ဂိမျးတှကေို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဆော့ကစားတတျတဲ့ သူတှအေတှကျ copper cooling tube ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ Nubia ရဲ့ ဖုနျးသဈဟာ အဆငျ့မွငျ့ ဖုနျးတဈလုံးဖွဈတာနဲ့အညီ Snapdragon 855+ chipset ၊ 256GB (UFS 2.1 storage) တှေ သုံးထားပါတယျ။ ဒီဖုနျးမှာ 5000 mAh battery ကို အားအပွညျ့ ထညျ့ထားပွီး 27W fast charging ပါမှာပါ။
(9). Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro
Mi 10 Pro ကတော့ ထူးကဲတဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှနေဲ့ လကျရှိအခြိနျမှာ ထိပျဆုံးရောကျနတေဲ့ဖုနျးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပွီးတော့ Xiaomi ရဲ့ 2020 ခုနှဈအတှငျး အဆငျ့မွငျ့ flagship ဖုနျးဖွဈပွီး 6.67 လကျမမှာ 120Hz AMOLED display သုံးထားပါတယျ။ full HD+ resolution နဲ့ ဖွဈပါတယျ။ Xiaomi က touch sampling rate ပိုငျးမှာလညျး 180Hz ဖွဈပွီး Galaxy S20 series နဲ့ ROG Phone2တို့ထကျ နညျးနညျးပိုသာပါတယျ။ Mi 10 Pro ဖုနျးမှာ 108MP sensor နဲ့ ကငျမရာ4လုံး ပါဝငျပွီး dual Mode 5G ထောကျပံ့ပါတယျ။ Android 10 အခွပွေု software ကို သုံးနိုငျမှာဖွဈပွီး 4500 mAh battery နဲ့အတူ 50W fast charging support ပါ။ Mi 10 ကိုတော့ Pro လိုမြိုး မဟုတျတော့ပါဘူး။ 90Hz AMOLED screen နဲ့ 30W fast charging ပေးထားပါတယျ။
(10). OPPO Reno3Pro
OPPO ရဲ့ အဆငျ့မွငျ့စမတျဖုနျးReno3pro ဖွဈပွီး စမတျဖုနျးရစေီးကွောငျးမှာ ထိပျဆုံးက ရှိနပေါတယျ။ ဒီဖုနျးရဲ့ နောကျဘကျမှာ quad-rear camera စနဈနဲ့ဖွဈပွီး Snapdragon 765 chipset သုံးထားပါတယျ။ မကျြနှာပွငျပိုငျးမှာတော့ 90Hz high refresh rate screen သုံးထားပါတယျ။ 30W fast charging ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ အခွားလုပျဆောငျခကျြအနနေဲ့ 6.5-inch display နဲ့အတူ 180Hz touch detection rate နဲ့ သုံးနိုငျမှာပါ။ 12GB RAM, USB Type-C port ၊ NFC. 44MP+2MP sensors တှအေပွငျ selfie ကငျမရာကို screen ထဲမှာ ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
(11). Google Pixel 4
Samsung Galaxy Note 10+ နဲ့ iPhone 11 Pro Max တို့မှာ 90Hz display သုံးထားပါတယျ။ သူတို့ကိုကြျောပွီး နောကျထပျကွညျ့စရာ ဖုနျးတဈလုံးကတော့ Pixel4ပါ။ ပုံမှနျ Pixel4ဖုနျးက 5.7-inch FHD+ screen နဲ့ဖွဈပွီး XL အမြိုးအစားကတော့ 6.3-inch QHD+ panel ထညျ့ထားပါတယျ။ displays support ကတော့ 90Hz refresh rate ပါ။ ဒါပမေယျ့ 2019 trends ဖွဈတဲ့ bold bezels နဲ့ လုံးဝ Smooth Display ဖွဈနမှောပါ။
(12). Razer Phone
Razer ရဲ့ မြိုးဆကျသဈဖုနျး Razer Phone2ပါ။ 5.7-inch 2K LCD screen နဲ့ဖွဈပွီး 16:9 aspect ratio မှာ 120Hz refresh rate သုံးပေးထားပါတယျ။ OnePlus7Pro ထကျ ပိုခြောမှတေဲ့ Display ကို ခံစားရမှာဖွဈပွီး 120fps (LCD) အထိ ဂိမျးအတှအေ့ကွုံကောငျးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပါ။ hardware ပိုငျးကတော့ 2019 ခုနှဈအတှငျး ထှကျခဲ့တဲ့ Android flagship တှအေတိုငျးပဲ တူညီပါတယျ။
2019 ခုနှစ်အတွင်း စမတ်ဖုန်းဝါသနာရှင်များကြားမှာ လူပြောအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ 90Hz displays ဆိုတဲ့ Display Refresh Rate ပါ။ မြင့်မားတဲ့ Display Refresh Rate ဆိုတာ ဟိုးယခင်တည်းက monitor တွေဆီမှာ ရှိနေခဲ့ပြီးသားပါ။ ယခုနှစ်ပိုင်းလောက်မှသာ ဖုန်းတွေဆီကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေဆီကို ရောက်တဲ့ Display Refresh Rate တွေကလည်း တဖြည်းဖြည့် မြင့်မားသထက် မြင့်မားလာပါတယ်။ တော်တော်များများ စမတ်ဖုန်းသုံးတဲ့ သူအများစုကတော့ ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ဆိုတာနဲ့ resolution, colors, PPI နဲ့ Display ကို ဘယ်အမျိုးအစား သုံးလာတယ်ဆိုတာလောက်ကိုသာ ပြောကြမှာပါ။ display refresh rate ကိုတော့ အရမ်းဦးစားပေး ပြောကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ display refresh rate ဆိုတာကလည်း 2019 ရောက်မှသာ သေချာလေး လူပြောသူပြော များလာတာပါ။ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာလည်း display refresh rate ဆိုတာ ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ 90Hz or 120Hz refresh rate displays သုံးထားတဲ့ ဖုန်းတွေအကြောင်း ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(1). Refresh Rate (Hz) ဆိုတာ ဘာလဲ။ FPS နဲ့ အတူတူပဲလား။
refresh rate ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကတော့ layman terms အမျိုးအစားထဲမှာပါပြီး တစ်စက္ကန့်အတွင်း ဖန်သားပြင်၏ ပုံရိပ်ကို အကြိမ်မည်မျှ Refresh လုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အရေအတွက်ကို ပြောတာပါ။ ၎င်းကို အခြေခံအားဖြင့် Hz နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ လက်ရှိစမတ်ဖုန်းအများစုမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Refresh Rate ကတော့ 60Hz refresh rate ဖြစ်ပါတယ်။ သာမာန်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ 60 Hz Refresh Rate ဆိုလျှင်တောင် လူ့ရဲ့မျက်စိ အမြင်အာရုံဖြင့် သတိပြုမိနိုင်စွမ်းထက် မြင့်မားနေ၍ ပုံမှန်အသုံးပြုသူများအတွက်တော့ Screen Refreshing ကို သတိမပြုမိနိုင်ပါဘူး။ တချို့က Refresh Rate ကို Frame Per Second နဲ့ မှားတတ်ကြပါသေးတယ်။ Frame rate ဆိုတာက program တစ်ခုကနေ သင့် display ကို တစ်စက္ကန့်အတွင်း ပေးပို့တဲ့ video frame ပမာဏကို ပြောတာပါ။ အဲ့ဒီပေးပို့လိုက်တဲ့ frame တွေကို တစ်က္ကန့်အတွင်း ဘယ်နှစ်ကြိမ် update လုပ်ပြီး ပြနိုင်လဲဆိုတဲ့ နှုန်းကိုတော့ Display Refresh Rate လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ game တစ်မျိုးက 100 FPS (Frame Per Second) နဲ့ run နေတယ်ဆိုရင် refresh rate များတဲ့ display နဲ့ဆိုရင် လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုမိုချောချောမွတ်မွတ် မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ပုံမှန်ဖုန်းတွေမှာ သုံးနေတာတွေဟာ refresh rate 60Hz နဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုဆိုရင် 90Hz & 120Hzသုံးထားတဲ့ ဖုန်းတွေလည်း ရှိနေပါပြီ။
စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာ ဦးဆောင်သူဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung ဟာ refresh rate မြင့်မားတဲ့ စမတ်ဖုန်း displays ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာလည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းအတွက်ဆိုရင် Samsung refresh screen ဖုန်းတွေ လိုအပ်သလိုပါ။ ဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Galaxy S20, Galaxy S20+ နဲ့ Galaxy S20 Ultra ဖုန်းတွေမှာ Infinity-O Displays နဲ့အတူ 120Hz refresh rate ကို သုံးပေးထားပါတယ်။ မူလက Quad HD+ resolution ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပေ့မယ့် 120Hz refresh rate option ကို FHD+ resolution အတွက် ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။ hardware ပိုင်းအရဆိုရင်တော့ ဒီဖုန်းတွေမှာ Snapdragon 865 SoC / Exynos 990 SoC တွေနဲ့ အတူ 16GB LPDDR5 RAM ၊ 512GB (UFS 3.0 storage) တွေ ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ ကင်မရာကလည်း ယခင် S စီးရီးတွေနဲ့ လုံးဝကွဲပြားသွားပြီး 108MP အဓိကကင်မရာနဲ့ 48MP periscope zoom ကင်မရာတွေတောင် သုံးနေပါပြီ။ 8K video တွေ ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး professional-level filming အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီလို့ Samsung က ဆိုပါတယ်။
ROG Phone2ဟာ 120Hz AMOLED display နဲ့အတူ Snapdragon 855 Plus chipset ကို ပထမဆုံးသုံးတဲ့ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ သူ့ရဲ့ display အကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ 6.59-inch Full HD+ screen မှာ Gorilla Glass6နဲ့ ကာကွယ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ under-display fingerprint scanner ကိုလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မှာ DCI-P3 color scale, HDR10 နဲ့ SDR ကနေ HDR အထိ တိုးမြင့်ပေးနိုင်တဲ့ Display နည်းပညာတွေလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပါဝါစွမ်းအားပိုင်းအတွက် 6000 mAh ခပ်ကြီးကြီး ဘက်ထရီကို 30W fast charging support လုပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပါလာတာတွေကတော့ 12GB LPDDR4x RAM နဲ့ 512GB (UFS 3.0 storage) တို့ပါ။ ကင်မရာပိုင်းကိုတော့ 48MP အပြင် 13MP2လုံး ထည့်ပေးထားပြီး အရှေ့ဘက်မှာ 24MP သုံးနိုင်မှာပါ။
တူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ဖြည့်စွက်ပါဝင်မှုတွေ အပိုင်းမှာ အဆင့်မြင့်တဲ့ဖုန်းတွေလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ ပြီးတော့ high display refresh rate ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ဒီဖုန်း2လုံးမှာ ကွာဟချက်ဆိုလို့ OnePlus 7T Pro မှာ Snapdragon 855 Plus chipset နဲ့ Warp 30T charging သုံးထားတာပါ။ ကျန်တဲ့အချက်တွေ အားလုံးနီးပါးကတော့ OnePlus7Pro နဲ့ တူညီပါတယ်။
high refresh rate screen နဲ့ ဖုန်းကိုင်ချင်ရင် OnePlus ထဲကပဲ ဝယ်ရမလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ OnePlus 7T ကလည်း ဒီလိုအရည်အသွေးမြင့် refresh rate နဲ့ ဖုန်းစာရင်းထဲမှာ ရောက်နေလို့ပါ။ ဒီဖုန်းမှာ high-quality AMOLED screen သုံးထားတာကတော့ တကယ်မိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ပါဝါစွမ်းအားပိုင်းအတွက် Snapdragon 855 Plus chipset နဲ့ဖြစ်ပြီး 8GB RAM ၊ 128GB storage တွေ သုံးပေးထားပါတယ်။ 30W Warp charging လည်း ဘက်ထရီအတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားပါသေးတယ်။
ဈေးလည်း သက်သာရမယ်။ အရည်အသွေးပိုင်းမှာ စိတ်ချရမယ်ဆိုပြီး ထွက်လာတဲ့ Realme ဖုန်းတွေမှာ Realme X2 Pro ကလည်း အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အဆင့်တစ်ခုမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Realme ရဲ့ ပထမဆုံး flagship ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး 90Hz FHD+ AMOLED Screen သုံးထားပါတယ်။ ပါဝါစွမ်းအားပိုင်းအတွက် Snapdragon 855+ chipset နဲ့အတူ ထပ်မံတိုးမြင့်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ 256GB UFS 3.0 storage တွေနဲ့ သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 4000 ဘက်ထရီစွမ်းအားအတွက် 65W Super VOOC charging နဲ့ အားသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ 100% အားအပြည့်ရဖို့အတွက် 30 မိနစ်ပဲ ကြာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဈေးသက်သာတဲ့ စွမ်းရည်သင့်ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာသုံးထားတဲ့ refresh rate ကြီးကတော့ ကျွတ်ဆင်ကြီးပါ။ ဒီဖုန်းအတွက် 120Hz refresh rate screen သုံးထားပါတယ်။ 6.67-inch IPS display မှာ full HD+ resolution ထောက်ပံ့ပါတယ်။ HDR10 support လုပ်တဲ့ ဖုန်းလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ X2 display အချက်အလက်တွေကတော့ ကြည့်ရတာကောင်းမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ် ပုံဖော်နေပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ 120Hz refresh rate ဖုန်းမှာ သုံးထားတဲ့ ပရိုဆက်ဆာကတော့ Snapdragon 730G သုံးထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Redmi K30 နဲ့ သွားတူနေပါတယ်။ Poco X2 ရဲ့ အပေါ်လွင်ဆုံးအချက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ 4500 mAh ဘက်ထရီနဲ့ 27W fast charger လို့သာ ဆိုရမှာပါ။
ဂိမ်းမင်းဖုန်းတစ်လုံးအတွက် refresh rate ဘယ်လောက်သုံးထားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းက အမှန်တကယ် လိုအပ်လှပါတယ်။ ZTE ကျောထောက်နောက်ခံလုပ်ထားတဲ့ Red Magic3မှာ 90Hz AMOLED screen ထောက်ခံပါတယ်။ ဂိမ်းတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆော့ကစားတတ်တဲ့ သူတွေအတွက် copper cooling tube ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Nubia ရဲ့ ဖုန်းသစ်ဟာ အဆင့်မြင့် ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တာနဲ့အညီ Snapdragon 855+ chipset ၊ 256GB (UFS 2.1 storage) တွေ သုံးထားပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ 5000 mAh battery ကို အားအပြည့် ထည့်ထားပြီး 27W fast charging ပါမှာပါ။
Mi 10 Pro ကတော့ ထူးကဲတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ဖုန်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပြီးတော့ Xiaomi ရဲ့ 2020 ခုနှစ်အတွင်း အဆင့်မြင့် flagship ဖုန်းဖြစ်ပြီး 6.67 လက်မမှာ 120Hz AMOLED display သုံးထားပါတယ်။ full HD+ resolution နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi က touch sampling rate ပိုင်းမှာလည်း 180Hz ဖြစ်ပြီး Galaxy S20 series နဲ့ ROG Phone2တို့ထက် နည်းနည်းပိုသာပါတယ်။ Mi 10 Pro ဖုန်းမှာ 108MP sensor နဲ့ ကင်မရာ4လုံး ပါဝင်ပြီး dual Mode 5G ထောက်ပံ့ပါတယ်။ Android 10 အခြေပြု software ကို သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 4500 mAh battery နဲ့အတူ 50W fast charging support ပါ။ Mi 10 ကိုတော့ Pro လိုမျိုး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ 90Hz AMOLED screen နဲ့ 30W fast charging ပေးထားပါတယ်။
OPPO ရဲ့ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းReno3pro ဖြစ်ပြီး စမတ်ဖုန်းရေစီးကြောင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက ရှိနေပါတယ်။ ဒီဖုန်းရဲ့ နောက်ဘက်မှာ quad-rear camera စနစ်နဲ့ဖြစ်ပြီး Snapdragon 765 chipset သုံးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ပိုင်းမှာတော့ 90Hz high refresh rate screen သုံးထားပါတယ်။ 30W fast charging ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့ 6.5-inch display နဲ့အတူ 180Hz touch detection rate နဲ့ သုံးနိုင်မှာပါ။ 12GB RAM, USB Type-C port ၊ NFC. 44MP+2MP sensors တွေအပြင် selfie ကင်မရာကို screen ထဲမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Samsung Galaxy Note 10+ နဲ့ iPhone 11 Pro Max တို့မှာ 90Hz display သုံးထားပါတယ်။ သူတို့ကိုကျော်ပြီး နောက်ထပ်ကြည့်စရာ ဖုန်းတစ်လုံးကတော့ Pixel4ပါ။ ပုံမှန် Pixel4ဖုန်းက 5.7-inch FHD+ screen နဲ့ဖြစ်ပြီး XL အမျိုးအစားကတော့ 6.3-inch QHD+ panel ထည့်ထားပါတယ်။ displays support ကတော့ 90Hz refresh rate ပါ။ ဒါပေမယ့် 2019 trends ဖြစ်တဲ့ bold bezels နဲ့ လုံးဝ Smooth Display ဖြစ်နေမှာပါ။
Razer ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်ဖုန်း Razer Phone2ပါ။ 5.7-inch 2K LCD screen နဲ့ဖြစ်ပြီး 16:9 aspect ratio မှာ 120Hz refresh rate သုံးပေးထားပါတယ်။ OnePlus7Pro ထက် ပိုချောမွေတဲ့ Display ကို ခံစားရမှာဖြစ်ပြီး 120fps (LCD) အထိ ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ hardware ပိုင်းကတော့ 2019 ခုနှစ်အတွင်း ထွက်ခဲ့တဲ့ Android flagship တွေအတိုင်းပဲ တူညီပါတယ်။
Previous articleအမရေိကနျကြောငျးသားမြားကို စပိုငျလုပျမှုအတှကျ Google ကို နယူးမက်ကဆီကိုတရားစှဲ
Next articleXiaomi Mi Mix Alpha ကို မကွာမီ ရောငျးခလြာတော့မညျ
Best Phone Camera 2019 : The Best Android And Apple Smartphone...
Best Mid-Range Smartphones Of 2019 : Great, Affordable Phones